Zidane iyo Conte oo shaqada kala wareegi doono tababaraha Man United. - Iftiin FM
Zidane iyo Conte oo shaqada kala wareegi doono tababaraha Man United.
by Iftiin FM Reporter September 18, 2021
Sida ay shaaca ka qaadeen warbixinada ka imaanaya gudaha England maanta oo Jimce ah, waxaa jiro magacyo cusub oo u sharaxan shaqada tababarka ee kooxda Manchester United, haddii ay dhacdo in shaqada laga cayriyo Ole Gunnar Solskjaer.
Sida wararka qaar ay tilmaamayaan tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa laga yaabaa in shaqada laga cayriyo, kaddib markii ay Manchester United guuldarro lama filaan ah kala kulantay kooxda Young Boys, ciyaartooda koowaad guruubka F ee tartanka Champions League.
Kooxda Manchester City oo raadineyso Weeraryahanka Kooxda Paris Saint-Germain Neymar Jr.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Express” ee dalka England, macalinkii hore kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa u sharaxan inuu ka badelo Solskjaer kursiga tababaraha xilli ciyaareedkan.
Xiddigaha ugu mushaarka badan ee horyaalka Premier League
Wararka ayaa waxay tilmaamayaan in tababaraha reer Talyaani ee Antonio Conte uu kursigan kula tartamayo dhigiisa reer France ee Zinedine Zidane.
Rashford oo guul ku hoggaamiyey Man United .
Wargeyska “Express” ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay in Zinedine Zidane horrey lala xiriiriyay shaqada tababarka ee kooxda Manchester United sanadkii 2018, kaddib markii uu ka tagay Real Madrid, laakiin macalinka reer France ayaa doorbiday inuu nasto oo uusan xilligaas hoggaamin koox kale.
Dowladda Kenya oo bilaawday olole ka dhan ah khamaarka iyo khamriga.
Mason Greenwood iyo Bukayo Saka oo u tartamaya abaalmarin dahabi ah.
Gabriel Jesus oo ku faraxsan Kooxdiisa Cusub
Wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee maanta
Ángel Di María oo heshiis la gaaray Juventus